GOverlay: kugadzirisa zvakapetwa mumitambo pasi peLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri gamer pasi peLinux uye uchida kumisikidza zvishandiso senge MangoHud, vkBasalt uye ReplaySorcery, saka unofanirwa kunamatira kune yazvino vhezheni yesoftware. GOverlay. Chirongwa chinokubatsira kubata zvakapetwa, uye icho chichava mudziyo wakakosha kubva zvino zvichienda mberi.
Kune avo vachiri kusaziva iwo mapurojekiti ataurwa pamusoro, taura izvozvo HandleHud Icho chidimbu chinokutendera iwe kuratidza FPS, kushandiswa kwe RAM uye VRAM, kuenzanisa, uye zvimwe zvakawanda mu-screen HUD iyo inogara ichiratidzwa munzvimbo yepamusoro paunenge uchitamba.
kBasalt chimwe chirongwa chinobvumira mhedzisiro dzakasiyana mumitambo yemavhidhiyo senge Contrast Adaptive Sharpening, Denoised Luma Sharpening, Fast Inofungidzirwa Anti-Aliasing, uye zvimwe zvakawanda. Uye yekupedzisira, Dzokorora Huroyi Icho chinokurumidza uye chiri nyore basa kuti ugone kutora zvidiki zvidiki zvemutambo.
Zvakanaka, naGoverlay, a yemahara uye yakavhurwa sosi app, unogona kuwedzera zvese zvaunogona kuita panguva imwe chete nenzira yakangwara uye kuti zvinoshanda nemazvo. Zvakare, mune yazvino vhezheni yakaburitswa, 0.5.1 inosanganisira zvimwe zvitsva maficha uye kugadzirisa.
Ehezve, GOverlay inoshanda nekufukidzira nekugadzira GUI zvese zviri pasi peVulkan API uye neOpenGL. Izvo zvinowedzera mikana yekutsigira maererano ne graphical APIs muLinux.
Kana iri yake Graphic inowanikwa, zviri nyore. Kune rimwe divi, iwe unenge uine vkBasalt, MangoHud uye Replay Sourcery tabo iwe aunogona kusarudza kudzora ese ma parameter anoonekwa pane huru yekumisikidza skrini, uye woona mhedzisiro munguva chaiyo munzvimbo yayo yepakati. Saka iwe unogona kuona kuti zvaizotaridzika sei mumutambo wevhidhiyo.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve GOverlay - GitHub Yepamutemo Saiti
Mamwe mashoko nezve MangoHud - GitHub Yepamutemo Saiti
Rumwe ruzivo nezve kBasalt - GitHub Yepamutemo Saiti
Rumwe ruzivo nezve Replay Soroyi - GitHub Yepamutemo Saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » GOverlay: kugadzirisa zvakapetwa mumitambo pasi peLinux
Ini ndanga ndichigadzira "vhezheni" yechirongwa ichi ( https://github.com/tonehrk/LOverlay ) asi ndakamusiya rinenge gore rapfuura. Icho chikonzero, Goverlay yaive yekunetseka kuumbiridza (kubva kuAUR), inobvunza kuisa kunyangwe IDE kana ndikarangarira nemazvo. Pamusoro pezvo paive nezvimwe zvinhu zvandisina kufarira ... zvakanaka. Ndine chokwadi chekuti ndichaichengeta zvakare. XD
Asi hazvisi izvo zvakaipa, unogona kuwedzera marongero emutambo wega wega zvakasiyana. Nezvo, ini ndichiri kusarudza vhezheni yangu. : p